4K Nature Relax TV 1.1.0.34 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.0.34 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး 4K Nature Relax TV
4K Nature Relax TV ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
4K သဘာဝတရားတီဗီ 4K HDR နှင့် 4K Ultra HD content တွေကိုစီးဆင်းပေးဖို့ပထမဦးဆုံးန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နည်းနည်းအနားယူပါ။
ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့ထိုသို့ကြိုးစားပါ။ အဘယ်သူမျှမကတိ။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။
Pro ကိုအနုပညာ Inc ကနေ app သစ်နှင့်အတူဘယ်တော့မှမတိုင်မီတူသောအဆင်းလှကသဘာဝနေရာများနှင့်အတွေ့အကြုံသဘောသဘာဝမှလွတ်မြောက်ရန်တစ်ဦးအသက်ပြင်းပြင်းရှူယူပါ။ 4K HDR နှင့် 4K တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စုဆောင်းခြင်း / က Ultra HD ကိုသဘောသဘာဝစိတ်လှုပ်ရှားသဘာဝထက်ပိုမို 1000 နာရီနှင့်အတူအခမဲ့ကြော်ငြာဗီဒီယိုများပိုမိုနီးကပ်စွာသဘာဝကအံ့ဘွယ်သောအမှုဆောင်ကြဉ်းအပန်းဖြေအနားယူ!
အံ့မခန်းသဘောသဘာဝရန်လွယ်ကူ access ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အသေးစိတ်-oriented 4K HDR နှင့် 4K / UHD အရည်အသွေးနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေ, လေ့လာမှု, အိပ်စက်ခြင်း, အတွင်းစိတ်အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပိုစုံလင်သောဗီဒီယိုများအားဖြေလျော့။
အစစ်အမှန်သဘာဝတစ်ခုရောင်စုံပြတင်းပေါက်သို့သင့်ရဲ့ကျမဲ့တီဗီ, ဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းတွေ Transform, သငျ့အိမျသို့သဘောသဘာဝကိုဆောင် ခဲ့. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ချောင်သောနေရာများမှတစ်ဦးကို virtual ခရီးစဉ်ကို ယူ. , သဘောသဘာဝနှင့်အတူစစ်မှန်သောအတွင်းဆက်သွယ်မှုခံစားရသည်။
4K သဘာဝတရားကကမ်းလှမ်းခဲ့သောဗီဒီယိုများတီဗီနည်းနည်းအနားယူမယ့်တစ်ဦးဖျော်ဖြေရေးမဟုတ်, အဖြစ်ကောင်းစွာထူးခြားတဲ့ကုထုံး။ ပွော့ဂီတနှင့်သဘာဝအသံနှင့်အတူပေါင်းစပ် Fantastic ရှုခင်းသငျ့စိတျခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားရာမှအချို့အရာကြွင်းသမျှရရှိရန်နှင့်အေးဆေးငြိမ်းချမ်းစွာခံစားရရန်ကူညီပေးနေအကောင်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါကိုငြိမ်းစေသောဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာများကိုအိပ်? အိပ်မပျော်? app ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင်ကြာမြင့်စွာသောကာလ၌ရှိသည်မဟုတ်တူသောအိပ်စက်ခြင်း၏အပြည့်အဝညပျော်မွေ့!
• (သင့်အခမဲ့အစမ်းစတင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 သည်အထိကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ) ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့ထိုသို့ကြိုးစားပါ
•ကျော်-The-ထိပ်တန်း (OTT) / ဗီဒီယို-on-Demand (VOD)
•သင့် 4K တီဗီအတွက် Stream 4K HDR နှင့် 4K ဗီဒီယိုများ။
•အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုများ 4K / UHD နှင့် 4K HDR အရည်အသွေးရရှိနိုင်ပါသည်။
•မည်သည့် Chromecast ကိရိယာမှသင့်ဖုန်းမှသင့်ဖုန်းနှင့်စမ်းချောင်းဗီဒီယိုများဗီဒီယိုများအနားယူသဘောသဘာဝခံစားပါ။
•သင့် Google က app ကိုစာရင်းသွင်းရန်အကောင့် Play ကိုသုံးပါ။
•သင့်စိတ်ကိုဖြေလျှော့ခြင်းနှင့် TV အက်ပ်နည်းနည်းအနားယူ 4K အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို restore ။
* မှတ်ချက် * ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုကိုသာ။ လူနာစောင့်ရှောက်မှု setting ကိုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဤပြသပါလျှင်တစ်ဦးပေးဆောင်လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။ ပိုပြီးအချက်အလက်နှင့်အခမဲ့ကိုးကားအလည်အပတ်ခရီး https://4krelax.com/license များအတွက်
4K Nature Relax TV အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
4K Nature Relax TV အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
4K Nature Relax TV အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
4K Nature Relax TV အား အခ်က္ျပပါ
appstvcommunity စတိုး 5.82k 3.13M
4K Nature Relax TV ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း 4K Nature Relax TV အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.0.34
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://4krelax.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: FE:10:C6:B5:09:8A:8E:16:1F:C0:D8:A7:CA:4C:B4:8F:38:CA:EF:27
4K Nature Relax TV APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ